သတင်း - ကြက်လှောင်အိမ်မိတ်ဆက်
အနှစ်ချုပ် - အထွက်နှုန်းကောင်းပြီး သင့်ကြက်များ ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်းလာစေရန် မွေးမြူလိုပါက အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။ ကြက်သား လှောင်အိမ် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆင်ပြေအောင်လည်း လုပ်လို့ ရတာပေါ့လေ။ကြက်သား လှောင်အိမ် ငါတို့ကြက်တွေအတွက်၊ ဒါလုပ်နည်း ကြက်သား လှောင်အိမ်? ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးနော်။ကြက်သား လှောင်အိမ်များ
အထွက်နှုန်းကောင်းပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ကြက်တွေကို မွေးမြူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်ပါ။ ကြက်သား လှောင်အိမ် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆင်ပြေအောင်လည်း လုပ်လို့ ရတာပေါ့လေ။ကြက်သား လှောင်အိမ် ငါတို့ကြက်တွေအတွက်။ ပြီးရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ကြက်သား လှောင်အိမ်? ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးနော်။ကြက်သား လှောင်အိမ်များ
အလွှာ ကြက်သား လှောင်အိမ်
လှောင်အိမ်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကြက်မများ အကောင်ပေါက်ပြီး 141 ရက်သား သက်တမ်းရှိသောအခါတွင် အသုံးပြုသည်။ တစ်ခုတည်းလှောင်အိမ် အရှည် 400 မီလီမီတာ၊ အနက် 450 မီလီမီတာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် 450 မီလီမီတာ၊ နောက်ဘက်တွင် 380 မီလီမီတာ မြင့်ပြီး အောက်ခြေတွင် 7.5 ဒီဂရီ၊ လှောင်အိမ်. ဟိလှောင်အိမ် တံခါးပွင့်လာသည်။ အောက်ခြေကွက်လှောင်အိမ် warp အကွာအဝေး 22 မီလီမီတာနှင့် weft အကွာအဝေး 60 မီလီမီတာရှိသည်။ အပေါ်ဘက်နှင့် နောက်ကွက်များတွင် လိုက်လျောညီထွေ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ကြီးမားသော Aperture အကွာအဝေးရှိသည်။ သို့သော် ဘေးဘက်ကွက်၏ အလင်းဝင်ပေါက်သည် 25-30 မီလီမီတာ မြင့်ပြီး 40-50 မီလီမီတာ ကျယ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကွက်များသည် ကြက်များ အချင်းချင်း ကိုက်ခဲခြင်းမှ တားဆီးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။လှောင်အိမ် ကြက် ၃-၄ ကောင် မွေးမြူနိုင်သည်။ စုစုပေါင်းအမြင့်လှောင်အိမ် 1.7 မီတာရှိပြီး တံခါးအကျယ်မှာ 210-240 mm ဖြစ်သည်။.
သားမွေးလှောင်အိမ်များကို ယေဘူယျအားဖြင့် ရက်ပေါင်း 140 မတိုင်မီ သားပေါက်ကလေးများအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ထပ်နေသော လှောင်အိမ် ၃-၄ လွှာတွင် မွေးမြူထားသည်။ စုစုပေါင်းအရှည်သည် မျိုးပွားခြင်း၏ အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အမြင့်လှောင်အိမ် frame သည် 100-150 မီလီမီတာဖြစ်ပြီး၊ လှောင်အိမ် တစ်ခုချင်းစီ၏အရှည် လှောင်အိမ် အမြင့် 700-1000 မီလီမီတာ၊ လှောင်အိမ် 300-400 မီလီမီတာ, နှင့်အတိမ်အနက် လှောင်အိမ်400-500 မီလီမီတာ။ ကွက်ဇ်လှောင်အိမ် စတုဂံပုံ သို့မဟုတ် စတုရန်းဖြစ်ပြီး၊ အောက်ခြေပိုက်ကွန်၏အပေါက်သည် 12.5 မီလီမီတာ၊ ဘေးဘက်ပိုက်၏အပေါက်နှင့် ထိပ်ပိုက်သည် 25 မီလီမီတာ၊ လှောင်အိမ် တံခါးကို အရှေ့ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ချိန်ညှိနိုင်သော အကွာအဝေးရှိသည်။ လှောင်အိမ် တံခါးကွာဟမှုသည် 20-35 မီလီမီတာဖြစ်သည်။ အသီးသီးလှောင်အိမ် အကောင် ၃၀ ခန့်ရှိနိုင်ပြီး အကျယ်အဝန်းမှာ ၁.၆-၁.၇ မီတာဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ကြက်အသက် 41 မှ 140 ရက်အတွင်း မွေးမြူထားသော လှောင်အိမ်များကို အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကို သုံးလွှာဖြစ်သည်။ အမြင့် 1.7-1.8 မီတာ, နှင့်တစ်ခုချင်းစီလှောင်အိမ် အရှည် 800 မီလီမီတာ၊ အမြင့် 400 မီလီမီတာ နှင့် အနက် 420 မီလီမီတာ ရှိသည်။ အောက်ခြေကွက်လှောင်အိမ် 20-40 မီလီမီတာ၊ ထိပ်၊ ဘေးနှင့်နောက်ကွက်များ၏အချင်းသည် 25 မီလီမီတာဖြစ်ပြီး၊ အကျယ် လှောင်အိမ် တံခါးသည် 140-150 မီလီမီတာဖြစ်ပြီး 3-4 အလွှာထပ်နေသည်။ တစ်ခုတည်းလှောင်အိမ် အကောင် 7-15 ကောင် ထားရှိနိုင်သည်။
အသားစားကြက်လှောင်အိမ်များသည် သုံးဖက်မြင် လှောင်အိမ်များဖြစ်သည်။ လှောင်အိမ်များ၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် အစာသိပ်သည်းဆသည် မွေးမြူထားသော လှောင်အိမ်များနှင့် ဆင်တူသည်။ အချို့သော မွေးမြူရေးခြံများသည် ၎င်းတို့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန်အတွက် ပိုက်ကွန်ပြားများကို အသုံးပြုကြသည်။
ဒီဇိုင်းက ဟိ ကြက်သား လှောင်အိမ် ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့နှင့် အဓိက ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကြက်သား. ပိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းကြက်သား လှောင်အိမ် တိုးတက်မှုအတွက် ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ကြက်သား. ရွေးချယ်ခြင်း၏နိယာမလှောင်အိမ် ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းမှု၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ခြင်း။ ကြက်သား လှောင်ချိုင့်၊ ကြက်သား လှောင်အိမ် လယ်ယာတည်ထောင်ခြင်း၊ မွေးမြူရေးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး စသည်တို့ကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ဤအပြုအမူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ညွှန်းချက်နှင့် ထိုက်တန်ပါသည်။